Konke odinga ukukwazi ngama-Sama kusasa | News24
Konke odinga ukukwazi ngama-Sama kusasa
Cape Town – Abahleli bomcimbi wokuklomelisa ngezindondo waminyaka yonke, ama-South African Music Awards (Sama) bathembisa ukubukisa abantu bakuleli into yamehlo kuma-Sama 23 nalapho kulindeke ukuthi kusine kudedelane abaculi abadumile abazobe benandisa esiteji.
Umcimbi omkhulu wama-Sama uzobe useSun City eNorth West ngoMgqibelo mhlaka-27 Meyi 2017 kanti uzosakazwa bukhoma kuSABC1 ngo-20:00 kusihlwa.
OLUNYE UDABA: Kugqame abaculi abasha kowamaSama
Kulo nyaka kugqame kakhulu abaculi abasha ohlwini lwabaculi abaphakanyiselwe emikhakheni eyehlukene kanti noNasty C ungomunye walabo abaqokelwe emikhakheni eminingi.
Zibonele uhlu oluphelele lwabaqokiwe lapha
Phakathi kwabanye babaculi okulindeleke ukuthi banandise kulo mcimbi kubalwa uKhuli Chana, Kwesta, uKelly Khumalo, uDr Tumi kanye noLebo Sekgobela.
Oyi-CEO yeRiSA nokuyiyona ehlela lo mcimbi, uNhlanhla Sibisi, uthi umcimbi wakulo nyaka uzobe usezingeni eliphezulu kakhulu.
“Awukwazi ukuphuthwa yilokho osekuhlanganiswe yithimba labadidiyeli ukubonisa ukuthi umculo waseNingizimu Afrika umayelana nani. Sibheke ubusuku obukhulu bezimangaliso. “Sibheke phambili ebusukwini obukhulu bezimangaliso kanye nemizuzu yomculo ezoxoxelwa izizukulwane ezizayo.”
Amathikithi atholakala ngo-R395 eComputicket abantu abajwayelekile, bese eba ngu-R795 awezicukuthwane (VIP).